Ishumi lombhali olungileyo | Uncwadi lwangoku
Nangona okwangoku andibhali kangako, kucacile ndisusa le ndiyibhalayo apha nakwabanye blogs, xa wayenza, wayedla ngokuthatha uthotho lwezikhokelo okanye amanyathelo ... Kwaba ngathi ezam izigqibo Ukuqhubeka nokuziva ukuba into endiyibhalileyo ndiyenzile ngolwazi lwezibakala, ngendlela echanekileyo kwaye ndinika eyam into eyingqayizivele nenokwahlulahlula ukubhalwa kwam nokwabanye abantu ...
Ngelo xesha, ndibhale la masiko ndifuna ukwabelana nawe namhlanje. Ukuba ukhangela nayiphi na injini yokukhangela intanethi uzakufumana uninzi lwazo, kungoko ke kufanelekile kwaye nganye nganye inoluvo lwayo malunga ne Ishumi (decalogue) lombhali olungileyo, ke ndingathanda ukwazi uluvo lwakho ngayo kwaye ngawaphi amanqaku ongacingi njengam. Ukusuka kukwahlukahlukana kwezimvo, kulapho ufunda khona kakhulu.
Isigqibo sam esithile sombhali olungileyo
Ukubhala, nayiphi na ifomathi ilungile: Ayinamsebenzi ukuba impembelelo ifika kuwe kwindawo yokutyela kwaye ungabhala kuphela kwisiqwenga sephepha, okanye ukuba uhlala kamnandi ekhaya kwaye unokukhetha phakathi kokukwenza kwincwadi yakho yencwadana yemifanekiso okanye kwilaptop yakho. Umbhali olungileyo unokuziqhelanisa nayo nayiphi na into.
Wonke umbhali olungileyo kufuneka afunde kakhulu, kwaye ayingoncwadi nje lwamandulo okanye kungengoncwadi lwale mihla nje, ... Kuya kufuneka ufunde okuninzi nayo yonke into, kokukhona kuya kubakho ukudibana.
Umbhali olungileyo Kuya kufuneka ubhale nokuba awufuni kuyenza okanye unoluvo lokuba le nto uyibhalayo ayilunganga. Njengabo nabuphi na obunye ubugcisa, ukubhala kuyenziwa. Inokuba uzelwe uzimisele ngakumbi ukuzibonakalisa ngokubhala kunomnye umntu, kodwa oko akuthethi ukuba uyeke ukuziqhelanisa ngakumbi nangakumbi. Bhala, emva koko ndibhale kwakhona.
Umbhali olungileyo ayihlali kumphezulu weetekisi zakho, jonga ubunzulu, imibongo nangona ibhala iprozi, kodwa ngaphandle kokunyanzela ulwimi. Musa ukuhombisa ngaphezulu kokubhaliweyo, sukuzenza ngathi awunguye, ngokuthetha ngokubhala.
Jonga okanye "khuphela" ii-greats ... IBeccquer, iAuster, iKundera, iBukowski, njl. Ndingaqala ukuthetha amagama kwaye ndingayeki. Jonga uncwadi lwakhe, indlela abhala ngayo, indlela abalisa ngayo nothetha ngayo. Funa ukufana nabo, ukuze xa uyifumana (nokuba ukude), ungongeza into oyichukumisayo eyawenza wahluke kwabanye.
Kholelwa kwinto oyenzayo. Uyakuva izimvo ezinje ngokuba "ukubhala akunamsebenzi"; «Uchitha ixesha lakho ukuba uyakholelwa kwaye uphupha ukuba ngenye imini incwadi izakupapashwa»… Njengobomi, apha uya kuva amabinzana adimazayo afuna ukukubonisa okanye akwenze ube phantsi. Kholelwa kwaye uzithembe, kuba akukho mntu wumbi uza kuyenza ngcono kunawe.
Nika abalinganiswa bakho ubuntu obukhulu, kholelwa kubukho babo kwaye ubazise ebomini. Kwimibhalo yakho ufana naloo Thixo bathi wadala ubomi ngaphandle kwento ... Ewe, yiba nguThixo odalayo, oguqula okanye otshabalalise nantoni na oyifunayo kwaye uthathe ibali lakho kwindlela oyifunayo.
Ukusuka kwiimvakalelo kunye nethuku imibhalo emikhulu inokuzalwa, kodwa Lumka! Ungasoloko ubhala phantsi komsindo omninzi okanye phantsi kovuyo olukhulu, kuba ukuba uyakwenza oko, uya kubhala kakuhle xa ujongene neemvakalelo eziguquke kakhulu. Ziqhelanise nokubhala xa uziva ungananto kwaphela.
Bhala ikwenzele. Musa ukucinga kuqala ukuba usapho lwakho okanye abahlobo bakho baya kuthini malunga nokubhala kwakho. Imibhalo yakho yeyakho, akakho omnye umntu.
Zincede ngengoma emnandi kwipiyano okanye ipeyinti ekukhuthaza ukuba uyile. Ubugcisa buhlala budala ubugcisa.
Kwaye ngoku uyazi imigaqo yam ethile ukuba wonke umbhali olungileyo kufuneka ayithobele okanye ubuncinci kufuneka ayifunde kwaye ayithathele ingqalelo, ucinga ntoni ngayo? Ngaba uyavumelana ngokubanzi noko ndikuthethayo okanye ungatshintsha into nge-100%? Ndingathanda ukwazi uluvo lwakho.
Le decalogue, njengoko bendibonisile ekuqaleni kwenqaku, yabhalwa kwiminyaka embalwa edlulileyo, kodwa ndakuba ndiyiphindile ukuyifunda, ndicinga ngokufanayo ngenqaku ngalinye. Ingakumbi kwinqanaba 2: "Wonke umbhali olungileyo kufuneka afunde okuninzi, ingapheleli nje kuncwadi lwamandulo okanye kungengoncwadi lwale mihla nje,
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Ishumi lombhali olungileyo
Ukuthobela njengoAdam ohamba ze egadini, ndiza kuthobela isithixokazi ngokuphendula inqaku laso. Ndiyifumene intle, igqibelele kakhulu, nangona wonke umntu eya kuba nezimvo zakhe, ezinye iindlela, esusa ezinye okanye ongeze ezinye njengoko elumkisile. Ndingathanda ukucebisa ngenqaku loku-1 ukuba kuluncedo kakhulu kum ukubhala iSMS njengendlela yokubhala into eyenzekayo kum ngelixesha ndingenanto ndiyibhalileyo, ngale ndlela andilibali indlela esele ndidlule ngayo. Kwinqaku lesi-2, indincedile nokuba ndifunde imizobo ebhalwe ezindongeni ezitalatweni, ayifundeki kuphela uncwadi, naphina apho kunokubakho inkcukacha esincedayo (kwanakoko kungabhalwanga). Enkosi ngale nqaku intle.
UCarlos A. Gómez Naranjo sitsho
Ndiyithandile xa kungekho mdla kwaye kulungile ukuchukumisa nokubhala into.
Phendula uCarlos A. Gómez Naranjo
Ukukhumbula uMaría Pascual, umbonisi omkhulu wamabali abantwana.